ငါ့အချစ်တော်တိရစ္ဆာန်များချိန်းတွေ့ »7အရုပ်ဆိုးအမှားအမျိုးသမီးများဒါကပျက်စီးခြင်းတစ်ဦးဆက်ဆံရေး၏မဆိုအခွင့်အလမ်းတွေကို Make
နောက်ဆုံးအပ်ဒိတ်လုပ်: ဖေဖော်ဝါရီ. 16 2020 |2မိဖတ်ပြီးသား
အဘယ်သူမျှမစုံလင်သည်. တကယ်တော့, လူတိုင်းဖြစ်လျှင်ချိန်းတွေ့အတော်လေးအဖြစ်တာပျော်စရာမဖြစ်လိမ့်မယ်. သို့သော်, ချိန်းတွေ့အတှေ့အကွုံကိုဖျက်ဆီးနိုင်သည်ကိုနည်းလမ်းတွေရှိပါတယ်. အောက်ပါအကြံပြုချက်များကိုခြိနျးတှေ့သညျ့အခါအမျိုးသမီးတွေမပွုသငျ့ကွောငျးအရုပ်ဆိုးအမှားတွေရှိပါတယ်.
အဆက်အသွယ်၏အများဆုံးအစပြုနှင့်ချက်ချင်းသူ့ထံမှမဆိုစာပေးစာယူကိုတုံ့ပြန်ရန်သင်လည်းရရှိနိုင်ပါသည်ပွောဆိုသမြှသောအရိပ်လက္ခဏာများမှာ. လူတို့သညျအခွားသူမြားလိုခငျြသူယုံကြည်မှုနှင့်လွတ်လပ်သောမိန်းမတို့အဘို့ကြည့်ရှု. သငျသညျစိုးရိမျဖြစ်သို့မဟုတ်သင့်ကောင်လေးအတွက်စိတ်ဝင်စားမှုပြသနိုင်ဖို့လိုလိမ့်မည်နေစဉ်, လွန်းရရှိနိုင်ဖြစ်ခြင်းအလွန်ဆိုးဝါးတဲ့အခြေအနေမျိုးကိုဖြတ်ပြီးလာကြလိမ့်မည်.
သူသည်လူတစ်ဦးလွတ်လပ်သောအမြိုးသမီးတလက်ျာလိုလား?! သို့သော်, သငျသညျလွန်းလျှင် “In-မှ” သင်ကိုယ်တိုင်, လူတို့သညျကိုပိတ်ထားပါလိမ့်မည်. သင်၏ရက်စွဲနှင့်သူ၏အတွေ့အကြုံများနှင့်အကျိုးစီးပွားအဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်ဝေမျှရင်းသင့်အကြောင်းပြောနေတာအချိန်ဖြုန်းဖို့အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်ဖြစ်ပါသည်.
သင်သည်သင်၏အလားအလာမစ္စတာသိမှရမယ့်နေ့စွဲပေါ်မှာ. ညာဘက်နှင့်အပြန်အလှန်. လူတသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုခြိနျးတှေ့ခငျြပါဘူးအဖြစ်အမြဲတစေသင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာဖြစ်ခြင်းရိုင်းစိုင်းဖြစ်ပါသည်, သူသည်သင်တို့သိဖို့လိုသည်. သင့်ရဲ့ဖုန်းတစ်ခုလုံးကိုနေ့စွဲအဘို့သင့်အိတ်၌မသာကြောင်းသေချာပါစေဒါပေမယ့်လည်းငြိမ်ဝပ်စွာနေအပေါ်င်သေချာအောင်.
Times သတင်းစာပြောင်းလဲနေတဲ့နှင့်ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲအပေါ်ဆပ်ဖို့ရာပူဇော်သက္ကာလိုအပ်ချက်ဖြစ်လာနေကြတယ်. ယောက်ျား၏လက်တဆုပ်စာကိုပေးဆောင်အပေါ်အပြင်းအထန်တောင်းဆိုလိမ့်မည်နေစဉ်, သငျသညျအနညျးဆုံးဥပဒေကြမ်းခွဲထွက်ဖို့မပူဇော်ကြပါလျှင်များစွာသောစိတ်ဓာတ်ပါလိမ့်မည်.
ရက်စွဲတစ်ခုအပေါ်တစ်ဦးသောက်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးရှိခြင်းဿုံဒဏ်ငွေဖြစ်ပါသည်နေစဉ်, ပိုလျှံ၌သောက်သို့မဟုတ်ပင်ရက်စွဲတစ်ခုအပေါ်ယစ်မူးလာပြီသူ့ကိုသူ၏အသက်အဘို့အပြေးကြလိမ့်မည်. မသာသင်တစ်ဦးထက်ပိုတဲ့ဆက်ဆံရေးမျိုးအတွက်အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဒါပေမဲ့မကြာခဏဆိုသလိုမဟုတ်သောဤပြပွဲအလားအလာသင်နောင်တရစေခြင်းငှါ, တစ်ခုခုဟုဆိုရန်လည်းအများကြီးဆောင်သောက်သုံးပါဘူး.
လူတို့သညျလုံးဝလက်ငင်း၎င်းက-The-one-let's-get-လက်ထပ်သို့ပထမဦးဆုံးရက်စွဲများကိုဖွင့်တဲ့သူကိုအမျိုးသမီးများကပိတ်ထားကြသည်. ထို့နောက်အံ့သြဖွယ်ပထမဦးဆုံးနေ့စွဲဒါပေမဲ့မင်းသမီးရှိခြင်းမရှိပိုကောင်းခံစားချက်ရှိပါတယ်, အစောင့်ထား “မင်းကိုချစ်တယ်” ပထမဦးဆုံးလအနည်းငယ်အဘို့ကိုယ်အကြံအစည်. လေးနက်သောရယူခြင်းနှင့်လည်းမကြာမီသူတို့အားခံစားချက်တွေကိုဖော်ပြသင့်ရဲ့ယောက်ျားသည်ပြေးစေမည်.